Home Wararka Maxay soo kordhinaysaa in Rooble guddi u magacaabo “Afgambigii Fashilmay”?
Maxay soo kordhinaysaa in Rooble guddi u magacaabo “Afgambigii Fashilmay”?
Siyaasadda qar-iska-tuurka ee RW Rooble ayaa waxay u muqataa inay wajo cusub oo hor leh ay gashay. Iyada oo caalamka ku taageeray in uu doorashada dalka ka shaqeeyo, shacabka Soomaaliyeedna ku taageereen, ayaa kooxa isaga ku shaqeystay waxa ay maalin maalinta ka danbeeysa ay lugaha u galinayaa dhooqo siyaasadeed oo marka ugu danbeeysay isaga siyaasada ka saari doonta!
Dhowr maalin ka hor ayaa ay ahayd markii qoraal ka soo baxay Wasiirka Amniga uu ku sheegay in uu soo deynayo Mukhtaar Roobow. Maxaa ka faa’iiday go’aankaas deg degta ku dhisanaa? Waxaad u muujisay shacabka Soomaaliyeed in aad colaad hor leh dalka galinaysid?
Golaha Wasiirada XFS ayaa cambaareeyay “Isku day Afgambi” oo 27kii December 2021 Madaxtooyada ku sameysay Xafiisyada Ra’iisul Wasaaraha & kan Golahaan uu ku shaqeeyo sida uu Warbaahinta u sheegay Wasiirka Warfaafinta XFS Cismaan Abuukar Dubbe.
Laanta Fulinta ayaa hoosta ka xariiqday in Guddi baaris dhab ah ku sameeyo ciidanka Villa Somalia dul dhigtay Xafiisyada Ra’iisul Wasaaraha & Golaha Wasiirada laga sugayo Wasiirka Koowaad ee XFS Maxamed Xuseen Rooble.
Su’aasho waxa ay tahay maxaa faa’iido ah oo ka imanaayo in uu hada magacaabo gedi iyada oo arimihii doorasadha loo balansan yahay? Waxa muuqata in Rooble uu markale fashil lugaha la gali doono hadii uusan helin cid talo fiican siisa!
Previous articleTurkish, Somali Foreign Ministers discuss bilateral ties
Next articleGolaha Wasiirada oo shalay ansaxiyay xisaab-xir ayan aqrin, kana doodin? Yaab
Ra’iisul Wasaare Khayre oo gaaray Magaalada Baydhabo.